Waa Kuma Xidiga Zinedine Zidane Aan Qorshihiisa Ku Jirin Ee Go'aanka Ku Gaadhay In Uu Atletico Madrid Ku Biiro? - Gool24.Net
Waa Kuma Xidiga Zinedine Zidane Aan Qorshihiisa Ku Jirin Ee Go’aanka Ku Gaadhay In Uu Atletico Madrid Ku Biiro?
Zinedine Zidane ayaa hadda kooxdiisa kowaad ee Real Madrid ku haysta 37 xidig waana in ilaa 14 ciyaartoy ka badan liiska xidigaha uu u bahaan yahay in uu xili ciyaareedka cusub ku shaqeeyo.
In liiska ciyaartoyda kooxda kowaad ee Real Madrid uu noday 37 ciyaartoy waxay taasi maamulka Madrid ku qasbaysaa in ay xidigo badan suuqa kala iibsiga ka iibiyaan ama ay xataa amaah ku bixin karaan.
Waxaa jira hal ciyaartoy oo haddaba diyaar u ah in uu u wareego dhinaca kale ee caasimada Madrid si uu Atletico Madrid ugu biiro waana xidig uu Diego Simeone doonayay waqti dheer.
Kooxaha Real Madrid iyo Atletico Madrid ayaa todobaadyadii ugu danbeeyay wada xajood ka soo lahaa suurtogalnimada uu Marcos Llorente ugu biiri karo kooxda Diego Simeone ee Atletico Madrid.
Markii uu Marcos Llorente bandhiga cajiibka ah ka sameeyay kooxda Alaves ee uu amaahda ku joogay, waxa uu Diego Someone doonayay in uu la soo saxiixdo Marcos Llorente laakiin Madrid ayaa markaas go’aan ku gaadhay in ay Bernabeu ku soo celiyaan Llorente.
Laakiin hadda oo aanu Marcos Llorente ku jirin qorshaha xili ciyaareed cusub ee Zinedine Zidane waxa uu diyaar u yahay in uu Diego Simeone kula shaqeeyo kooxda ay Madrid xifiltamaan ee Atletico Madrid.
Marcos Llorente ayaa kooxda Atletico Madrid badal ugu noqon kara xidiga khadka dhexe ee Rodri kaas oo ay Manchester City ku doonayso 70 milyan yuro.
Marcos Llorente ayaa xili ciyaareedkii la soo dhaafay marar badan muujiyay awood ciyaareed laakiin Zidane ayaan u arag mid qorshihiisa ka mid noqon kara taas oo siinaysa in uu Atletico madrid ku biiri doono.
Wararka ayaa sheegaya in Real Madrid ay Marcos Llorente ku iibin karto lacag 40 milyan yuro ah waana lacag kala badh ku dhaw inta ay Atletico Madrid ku iibin karto Rodri oo ay doonayaan in uu booskiisa buuxiyo.
Kooxaha Arsenal iyo Man United ayaa ka mid ah kooxaha xiisaynaya saxiixa Marcos Llorente laakiin waxay hadda u muuqataa in uu ka soo jeedsan doon qaybta Madrid ee kooxda Atletico Madrid.
Gareth Bale, Dani Cabellos, Vallejo, Mariano Dainz, Vinicius Jr, Isco iyo xidigo badan oo la mid ah ayaan wali mustaqbalkooda meel la saarin.
Si kastaba ha ahaatee, war baahinta Spain ayaa shaaciyay in haddii ayna dhibaato kale iman, in Marcos Llorente uu ku biiri doono Atletico Madrid waqtiyada dhaw ee soo socda.